Sheekh Shariif oo ku baaqay in la joojiyo colaada kasoo cusboonatay Jubbada Hoose iyo Shabeelaha Hoose – Somali Top News
April 7, 2020 April 7, 2020 Somali Top News	0 Comments
Hogaamiyaha Madasha Xisbiyada Qaran ahna Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sh Axmed ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaal beeleedyada ka dhacayay Gobolada Jubbada Hoose iyo Shabeellaha Hoose.
Sheekh Shariif oo qoraal soo saaray ayaa waxaa uu Beelaha ku dagaalamaya degmada Wanla-weyn iyo deegaano ku yaalla Duleedka Magaalada Kismaayo ug baaqay inay colaadda shuruud la’aan ku joojiyaan, isla markaana la xaliyo wax kasto oo tabasho ah.
“Walaalaha Soomaaliyeed ee ku dagaalamay deegaanada ka kala tirsan maamulada Jubaland iyo Koonfur Galbeed waxaan ugu baaqayaa inay colaadda shuruud la’aan ku joojiyaan, wax kastana oo tabasha ahna wada hadal iyo is qancin lagu dhameeyo”ayuu yiri Sheekh Shariif.
Madaxda Maamulada Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo Odayaasha dhaqanka ayuu Sheekh Shariif ka dalbaday inay u istaagaan sidii dagaalladaas ahliga loo joojin lahaa, wuxuuna sheegay inay diyaar u yihiin inay ka qeyb qaataan joojinta Colaada.
“Waxaan sidoo kale ugu baaqayaa madaxda, odoyaasha dhaqanka iyo guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada ee Jubaland iyo Koonfur Galbeed inay u istaagaan sidii dagaalladaas ahliga loo joojin lahaa, annagana waxaan diyaar ula nahay inaan ka qayb qaadanno oo aan gacan ka siinno nabadeynta dadka walaalaha ah bi’idnillaah” ayuu sii raaciyay hadalkiisa Shariif Sh Axmed.
Ugu dambeyn Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif ayaa Dowladda Federaalka ugu baaqay inay ka qeyb noqoto dadaal kasta oo looga hortagayo colaadaha soo noqnoqdey ee aafeeyey dalka.
← Caabudwaaq oo lagu gubay Jaad si qarsoodi ah lagu soo geliyay Galmudug
Jublanad oo Ciidamo u dirtay deegaano ku dhaw Kismaayo oo dagaal beeleedyo ay ka dhaceen →
Akhriso: Dhamaan musharixiinta madaxtinimo Puntland ee isdiiwaan gelisay iyo tirada
IGAD oo madaxda Soomaalida ugu baaqday iney heshiiyaan
January 9, 2019 Somali Top News 0
Maleeshiyaad ku dagaalamay xaafado katirsan Muqdisho
December 29, 2019 December 29, 2019 Somali Top News 0